WhatsApp Messenger 2.19.256 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
စတိုးမွ ေဒါင္းလုပ္မ်ား 50M - 250M
ဗားရွင္း 2.19.256 လြန္ခဲ့ေသာ 1 ရက္က
Application မ်ား ဆက္သြယ္ေရး WhatsApp Messenger
WhatsApp Messenger ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
Facebook အထဲကနေ WhatsApp ကို
WhatsApp ကို Messenger ကိုအန်းဒရွိုက်နှင့်အခြားစမတ်ဖုန်းများအတွက်ရရှိနိုင်မယ့်အခမဲ့ messaging app ဖြစ်ပါတယ်။ WhatsApp ကိုသင်မက်ဆေ့ခ်ျကိုရစေခြင်းနှင့်မိတ်ဆွေများနှင့်မိသားစုကိုဖုန်းခေါ် (ရရှိနိုင်သကဲ့သို့, 4G / 3G / 2G / EDGE သို့မဟုတ် Wi-Fi ကို) ဖုန်းရဲ့အင်တာနက်ဆက်သွယ်မှုအသုံးပြုသည်။ မက်ဆေ့ခ်ျများ, ခေါ်ဆို, ဓာတ်ပုံများ, ဗီဒီယိုများ, စာရွက်စာတမ်းများနှင့် Voice ကိုမက်ဆေ့ခ်ျများပေးပို့နှင့်လက်ခံရရှိရန်ကို SMS ကနေ WhatsApp ကိုမှ switch ။
• NO အခကြေးငွေ: WhatsApp ကို (ရရှိနိုင်သကဲ့သို့, 4G / 3G / 2G / EDGE သို့မဟုတ် Wi-Fi ကို) ဖုန်းရဲ့အင်တာနက်ကွန်နက်ရှင်ကိုအသုံးပြုသည်ကိုသင်မက်ဆေ့ခ်ျကိုရစေနှင့်သင်တိုင်းမက်ဆေ့ခ်ျကိုသို့မဟုတ်ခေါ်ဆိုမှုပေးဆောင်ရန်မလိုပါဒါ, မိတ်ဆွေများနှင့်မိသားစုကိုခေါ်မှ။ * WhatsApp ကိုသုံးစွဲဖို့မပါကြေးပေးသွင်းအခကြေးငွေရှိပါတယ်။
•မာလ်တီမီဒီယာ: ဓာတ်ပုံများ, ဗီဒီယိုများ, စာရွက်စာတမ်းများနှင့် Voice ကိုမက်ဆေ့ခ်ျများပေးပို့ပါနှင့်လက်ခံရရှိသည်။
•အခမဲ့ဖုန်းခေါ်: သူတို့တခြားနိုင်ငံမှာနေလျှင်ပင်, WhatsApp ကိုခေါ် ဆို. နှင့်အတူအခမဲ့အဘို့သင့်မိတ်ဆွေများနှင့်မိသားစုကို Call * WhatsApp ကိုဖုန်းခေါ်ဆိုမှုမဟုတ်ဘဲသင့်ရဲ့ဆယ်လူလာအစီအစဉ်ရဲ့အသံကိုမိနစ်ထက်သင့်ရဲ့ဖုန်းရဲ့အင်တာနက်ကွန်နက်ရှင်ကိုအသုံးပြုပါ။ ။ (မှတ်ချက်: ဒေတာများကိုစွဲချက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်အသေးစိတ်ကိုအဘို့သင့်ပံ့ပိုးပေးဆက်သွယ်ပါဒါ့အပြင်သင် WhatsApp ကိုမှတဆင့် 911 နှင့်အခြားအရေးပေါ်ဝန်ဆောင်မှုနံပါတ်များကိုရယူနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ ။ ) ။
• WhatsApp ဝက်ဘ်ဆိုက်များ: ကိုလည်းသင်ညာဘက်သင့်ကွန်ပျူတာ၏ဘရောက်ဇာမှ WhatsApp ကိုမက်ဆေ့ခ်ျများပေးပို့, လက်ခံနိုင်ပါတယ်။
• NO အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစွဲချက်: နိုင်ငံတကာတွင် WhatsApp ကိုမက်ဆေ့ခ်ျများပေးပို့ရန်မပိုတာဝန်ခံရှိပါတယ်။ ကမ္ဘာတဝှမ်းသင်၏မိတ်ဆွေများနှင့်အတူ chat နှင့်နိုင်ငံတကာ SMS ကိုစွဲချက်ကိုရှောင်ကြဉ်။ *
• username နှင့်တံသင်အလိုမ: အဘယ်ကြောင့်သေးသည်အခြားအသုံးပြုသူအမည်သို့မဟုတ် PIN ကိုမှတ်မိဖို့ရှိခြင်းနှောင့်အယှက်? WhatsApp ကိုရုံကို SMS နဲ့တူ, သင့်ဖုန်းနံပါတ်နဲ့အလုပ်လုပ်, သင်၏ဖုန်းရဲ့လက်ရှိလိပ်စာစာအုပ်နှင့်အတူချောမွေ့စွာပေါင်းစပ်။
•အမွဲ Logged IN: WhatsApp ကိုအတူသငျသညျမက်ဆေ့ခ်ျများလက်လွတ်မဒါသင်အမြဲ logged in ဝင်သောပါတယ်။ သင်၌ logged သို့မဟုတ်လော့ဂ်အောက်လုပ်ထားသောပါတယ်ရှိမရှိနှင့် ပတ်သက်. အဘယ်သူမျှမကပိုရှုပ်ထွေး။
•လျင်မြန်စွာသင့်ရဲ့အဆက်အသွယ်နှင့် ဆက်စပ်. : သင့်လိပ်စာစာအုပ်မြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့လွယ်လွယ်ကူကူခက်ခဲ-to-သတိရ username များထည့်သွင်းဖို့မလိုအပ်ရှိပါတယ်ဒါကြောင့် WhatsApp ကိုရှိတော်မူသောသင်တို့အဆက်အသွယ်အားဖြင့်သင်တို့ကိုချိတ်ဆက်ဖို့အသုံးပြုသည်။
• OFFLINE MESSAGES များ: သင်သည်သင်၏အသိပေးချက်များကိုလွဲချော်သို့မဟုတ်သင့်ရဲ့ဖုန်းကို turn off ရင်တောင် WhatsApp ကိုသင် app ကိုသုံးပါလာမယ့်အချိန်ကာလမရောက်မှီတိုင်အောင်သင့်ရဲ့မကြာသေးခင်ကမက်ဆေ့ခ်ျကိုကယ်တင်ပါလိမ့်မယ်။
•ပြီးအများကြီးပို: မျိုးစုံကိုတစ်ကြိမ်မှာအဆက်အသွယ်များ, နှင့်ပိုပြီးရန်, သင့်တည်နေရာကို Share လဲလှယ်အဆက်အသွယ်များ, set ထုံးစံနောက်ခံပုံများနှင့်အကြောင်းကြားစာအသံ, အီးမေးလ်ချက်တင်သမိုင်း, ထုတ်လွှင့်မက်ဆေ့ခ်ျများ,
* ဒေတာများကိုစွဲချက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ အသေးစိတျအဘို့သင့်ပံ့ပိုးပေးဆက်သွယ်ပါ။
ကျနော်တို့ကအမြဲသင့်ထံမှစကားကိုနားထောငျဖို့စိတ်လှုပ်ရှားနေပါပြီ! သင်သည်မည်သည့်တုံ့ပြန်ချက်, မေးခွန်းများကို, ဒါမှမဟုတ်စိုးရိမ်ပူပန်မှုများရှိပါကမှာကျွန်တော်တို့ကိုအီးမေးလ်ပို့ပါ:
သို့မဟုတ် twitter ကိုလိုကျနာ:
WhatsApp Messenger အတြက္ စတိုးအသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
WhatsApp Messenger အေပၚ စတိုး ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
WhatsApp Messenger အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
WhatsApp Messenger အား အခ်က္ျပပါ
ေကာင္းစြာ အလုပ္လုပ္ပါသည္ 6
လိုင္စင္ လိုအပ္သည္ 1
app အတု 2
cdu-play-store စတိုး 16.55k 13.22M
WhatsApp Messenger ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
ေနာက္ထပ္ ဆက္သြယ္ေရး အက္ပ္မ်ားကို ၾကည့္မည္
APK အေၾကာင္း WhatsApp Messenger အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 2.19.256
အသုံးပြုရန် ကိုက်ညီမှု Android 4.0.3+ (Ice Cream Sandwich)
ထုတ်လုပ်သူ WhatsApp Inc.
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ http://www.whatsapp.com/legal/#Privacy
App Name: WhatsApp Messenger
File Size: 36.37MB
Release date: 2019-09-13 19:05:49
အထောက်အပံ့ပေးနိုင်သော စီပီယူ: x86, x86-64, armeabi-v7a, arm64-v8a
လက်မှတ် SHA1: 38:A0:F7:D5:05:FE:18:FE:C6:4F:BF:34:3E:CA:AA:F3:10:DB:D7:99
ထုတ်လုပ်သူ (CN): Brian Acton
အဖွဲ့အစည်း (O): WhatsApp Inc.
နယ်မြေ (L): Santa Clara
WhatsApp Messenger APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ